समाजको हिरासतमा रहेको एउटा भव्य घरको कथा « Postpati – News For All
विशाल बस्नेत पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट
मंसिर २६, महोत्तरी । बर्दिबास नगरपालिका–१४ स्थित सुभम बस्तीमा जाने गल्लीको अली पर पुगेपछि दायाँतर्फ देखिने एउटा भव्य घरले जोकोहीलाई झसङ्ग बनाउँछ । घर नजिकै गएपछि भित्र खरानी नै खरानी छ । मानाैँ यो मुर्धाघर हो, जहाँ दाहसंस्कारको लागि यही घरलाई प्रयोग गरिन्छ । अगाडिपट्टी दुईवटा सटर छन् । सटरभित्र जलेका बोतल र सिसाहरू देखिन्छन् । दिउँसै अँध्यारो र भग्नावशेष देखिने यो घर किन यति डरलाग्दो छ ? बस्तीको बीचमा पनि यो घरले वरपरका मानिसलाई त्रसित बनाइरहेको ? यो घरबाट आवतजावत गर्ने जोकोहीमा यस्तै विभिन्न प्रश्न उब्जन्छ ।
२६ मंसिर २०७८, आईतवार को दिन प्रकाशित